မွေးနေ့ တို့ရဲ့ ချစ်စရာ အလေ့အကျင့်များ အကြောင်း – Let Pan Daily
-ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ နေရာမှာ No.1
-ရုပ်တည်ကြီးနေတတ်ပေမယ့်..တကယ်ခင်သွားရင်လဲ သူငယ်ချင်းအဖွဲ့ထဲမှာမျက်နှာအပြောင်ဆုံးကသူပဲ -အချစ်ကြီးသလောက် အချစ်ရေးမှာတော့ အရမ်းကံခေတယ်ရတာမလိုလိုတာမရတွေလေ.
-အစွဲလန်းလဲကြီးတယ်ချစ်ပြီဆို တခြားလူနဲ့မတူသလိုမုန်းပြီဆိုလဲ လှည့်မကြည့်တတ်ဘူး… – အချောကြီးမဟုတ်ပေမယ့်ဆွဲဆောင်မှုအရမ်းရှိတယ်ညို့အားအပြင်းဆုံးက အသံ💙
-အထာကျတဲ့ နေရာမှာ No. 1
-တခုခုဆို အရမ်းပြတ်သားတယ်ပြောစရာရှိရင် ဘယ့်သူ့ကိုမှာ အားမနာတတ်ဘူး
-မှန်တဲ့ ဖက်က ရပ်တည်တာမျိုးပေါ့.. -ရန်လိုတဲ့လူ နဲနဲများတယ် ဒါမယ့်ဘသူ့ကိုမှသိပ်ဂရု မစိုက်တတ်ဘူး…ဘလိုအခြေနေပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ သတ္တိရှိတယ်
-အပေါင်းသင်းဆိုလဲ ရွေးပြီးပဲပေါင်းတယ် အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရော သိပ်မထားတတ်ဘူးအတုယောင်တွေကို မုန်းလို့တဲ့လေ – ညို့အားအပြင်းဆုံးက ခန္ဓာကိုယ်💙(ယောကျာ်းလေးဆို အရမ်းခန့်ပြီးမိန်းကလေးဆိုလဲ အချိုးအစားကျတယ်..ဆွဲဆောင်မှုအရမ်းရှိတယ်)
-ဆရာကြီး လုပ်တဲ့နေရာမှာ No.1
-ပြောသာပြောတာနော် သြဇာက အရမ်းညောင်းတယ် -လူချစ်လူခင်လဲပေါတယ် လူတိုင်းကလဲယုံကြည်တယ် ခေါင်းဆောင်ကောင်း ပီသတဲ့ သူတွေပေါ့…
-ဒါမယ့် သိပ်မပွင့်လင်းတော့ ပျော်တယ်လို့ပဲထင်ရတာအမြဲတမ်းလိုလို အထီးကျန်နေတတ်တယ်… -မိသားစုဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပစ်ပယ်ခံရတဲ့ အချိန်က များနေတတ်တယ်
– ညို့အားအပြင်းဆုံးက မျက်လုံး💙(အကြည့်နဲ့ ညို့တာနော်…သူတို့နဲ့တွေ့ရင် မျက်လုံးတွေကို သတိထား အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတာ..🙈)
– ရူးတဲ့နေရာမှာ No.1
-တလောကလုံး သူတို့နဲ့တည့်, တဲ့လူ မရှိသလောက်ပဲ
-စိတ်ရင်းကောင်းတယ် အပြောဆိုးတယ် -စိတ်ဆိုးတုန်းလဲ ခနပဲ ပြီးရင် ဘာမှမဟုတ်ဘူး ပေါင်းသင်းရ ခက်တဲ့သူတွေ…
-အဖေကလွဲရင် တမိသားစုလုံးနဲ့ မျက်နှာကြောမတည့်ဘူးဘလောက်အသက်ကြီးကြီး ခလေးစိတ်ကမပျောက်ဘူး… – ညို့အားအပြင်းဆုံးက ဆံပင်ပုံစံ💙(မိန်းကလေး ဖြစ်ဖြစ် ယောကျားလေးဖြစ်ဖြစ်သူတို့တွေက ဆံပင်ကို အရမ်းတန်ဖိုးထားတာ)
-ချန်း တဲ့နေရာမှာNo.1 -ဘာလုပ်လုပ်လွဲတယ် သေချာခိုင်းလေလွဲလေပဲ -တခုခုဆို အမြဲအဆူအငေါက်ခံရတယ်… -စိတ်ရင်းကောင်းတော့ သူငယ်ချင်းတော့ပေါတာပေါ့ဒါမယ့်အတုအစစ် သိပ်မခွဲတတ်တော့ သူငယ်ချင်းကြောင့်ပဲခနခန ချောက်ချခံရတဲ့သူတွေ….
– အယုံလွယ်တယ် ၊ပိန်းတယ်ကိုယ့်ဖို့ ဘယ်တော့မှမကြည့်တတ်ဘူးအနစ်နာအရမ်းခံတတ်တယ်ညို့အားအပြင်းဆုံးက မျက်နှာ💙
( သေချာကြည့်မိလေ လှလေပဲ.🙈.)
-လေပွားတဲ့ နေရာမှာ No.1
-အရမ်းစကားများတယ် အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးကို တတွတ်တွတ်ပြောနေတာ… -ဒါမယ့် အကုန်လုံးကို သီးခံပြီးပေါင်းတတ်တယ် ရောက်တဲ့နေရာမှာ ချစ်မယ့်လူပေါတယ်
– ပြသနာတော့ ခနခနဖြစ်တယ် ပြသနာကမလာရင်တောင် သူတို့ကသွားရှာတာ အယုံလွယ်သလောက်သူတို့ဘေးမှာလဲ လိမ်မယ့်လူတွေချည်းပဲ….ညို့အားအပြင်းဆုံးက တော်ကီ..💙( အပြောတွေအောက်မှာ မျောသွားအောင်ကိုစွမ်းတာ သတိထားပြီးသာ ဆက်ဆံ..🙈)
-ယုတ်မာတဲ့ နေရာမှာ No.1😆
-အစစအရာရာ ဗိုလ်ကျတယ် လိုချင်တာမရရင် တလော ကလုံး စိန်ခေါ်ဖို့လဲ ဝန်မလေးဘူး -နေရာတကာ စိတ်ကြီးတတ်တဲ့ ဒေါသအိုးလေးတွေ..
-ဒါမယ့် စိတ်ရင်းကောင်းတယ် အပေါင်းအသင်းမင်တယ် အနစ်နာခံတတ်လို့လဲ ချစ်မယ့်လူပေါတယ် – ထင်တိုင်းကြဲနေတတ်ပေမယ့် အဆင်မပြေတာတွေ ခနခနကြုံနေတတ်တယ်
-ဘယ့်သူ့ကိုမှလဲ သိပ်မယုံဘူး သူတို့အနားလာတဲ့လူတိုင်းကို သံသယမျက်လုံးတွေနဲ့ပဲ ကြည့်တတ်တယ် ညို့အားအပြင်းဆုံးက အပြုံး…💙
( အထူးသဖြင့် သွားတက်၊ ပါးခွက် တွေပါနေတတ်တယ် သူတို့ပြုံးနေရင် မျက်နှာသာ ရအောင်လွှဲ အပြုစားခံရတာထက်ဆိုးတယ်..🥴🥴🥴)
ရည်းစား ထားတာ အလှထိုင် ကြည့်ပြီး ဘာလုပ်ရမှာလဲ? ကိုယ်မစားလည်း သူများ စားမှာပဲ ဆို တဲ့ နွားတွေ သိဖို့…
ဆီးခြို ကပြွီး ဘကျစုံဆေးဘကျ ဝငျတဲ့ ကွကျဟငျးခါးသီး ဖြျောရညျ
ဖုန်းအားသွင်းတာ နဲ့ ပတ်သက်လို့ လူတိုင်း လုပ်မိကြတဲ့ အမှားအယွင်းများ …